Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina TY160-3 Shehwa
I-TY160-3 bulldozer i-semi-rigid, ukushintshwa kwamandla, ukulawula amandla okusiza, umshayeli we-pilot wokubacindezela ulawulwa, nge-gearbox eyodwa elawulwa ngebhokisi leplanethi. Iqukethe ikhabethe likanokusho, ulayini wanamuhla owenzelwe izingxenye zekhava nokuqinisa idrayivu yokugcina.
I-TY160-3 bulldozer i-semi-rigid, ukushintshwa kwamandla, ukulawula amandla okusiza, umshayeli we-pilot wokubacindezela ulawulwa, nge-gearbox eyodwa elawulwa ngebhokisi leplanethi. Iqukethe ikhabethe likanokusho, ulayini wanamuhla owenzelwe izingxenye zekhava nokuqinisa idrayivu yokugcina. Yenza ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu, ikhono lokuhamba elingcono, ukusebenza okulula. Isebenza kalula ukulungisa ngezindleko eziphansi ngenxa yesakhiwo esilula esinezigingqizi zethrekhi engu-6pcs. I-bulldozer ekahle esetshenziswa emkhakheni kawoyela, ukutshala amalahle, uhlelo lwezemvelo nendawo enobudlabha njll.
Isisindo sokusebenza (kufaka phakathi i-ripper) (Kg): 16800
Ukucindezela komhlaba (kufaka phakathi i-ripper) (KPa): 65.6
I-gauge yethrekhi (mm): 1880
Ubuncane. imvume yomhlaba (mm): 400
Amandla we-dozing (m): 4.4
UMax. ukumba ukujula (mm): 540
Ubukhulu bebonke (mm): 514034793150
Amandla we-Flywheel (KW / HP): 131
UMax. i-torque (Nm / rpm): 830 / 1000-1200
Kukalwe ukusetshenziswa kukaphethiloli (g / KWh): 200
Uhlobo: Ithrekhi ukuma unxantathu.
I-sprocket iphakanyisiwe ukunwebeka: 6
Inani lamathrekhi wokugoqa (uhlangothi ngalunye): 2
IGiya 1 2nd 2nd
Phambili (Km / h) 0-3.29 0-5.82 0-9.63
Emuva (Km / h) 0-4.28 0-7.59 0-12.53
UMax. ingcindezi yesistimu (MPa): 15.5
Okukhipha uhleloL / min: 170
Langaphambilini I-TY165-3 Bulldozer
Olandelayo: I-SD6N Bulldozer